Myanmar Small Businesses Development: နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု
ယခင်အပါတ်ဆောင်းပါး (နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများ) ရဲ့အဆက်အနေနဲ့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာ ဆက်လက်တင်ပြပါမယ်။
အခြေခံအကြောင်းအချက်တွေပြည့်စုံပြီး မှန်ကန်တဲ့ မူဝါဒတွေချမှတ်နိုင်ရင်တော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ အကျိုုးသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဝင်ရောက်လာခြင်းက အလုပ်အကိုင်အသစ်တွေ ဖန်တည်းပေးနိုင်တဲ့အပြင် ပြည်တွင်းရှိလုပ်ငန်းများကိုလည်း ၎င်းတို့ ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူခြင်း၊ နည်းပညာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရပ်များ လွဲပြောင်းပေးခြင်းတို့ဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေနိုင် ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက ဖွံ့ဖြိုး ဆဲနိုင်ငံတွေလိုအပ်တဲ့ အရေးပါတဲ့ သွင်းအားစုတွေစီးဝင်လာအောင်ဖန်တည်းပေးနိုင်တဲ့အပြင်၊ တိုင်းပြည်အတွက် အရေးပါတဲ့ သွင်းကုန်တွေတင်သွင်းရန်အတွက် လိုအပ်သော နိုင်ငံခြားငွေရရှိနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်တခု လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ ပထမဆောင်းပါး အစပိုင်းမှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ အကျိုုးအမြတ်တွေဟာ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကနေ ရရှိနိုင်ဖို့ အလားအလာရှိတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မူဝါဒချမှတ်သူတော်တော်များများကတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဝင်လာတာနဲ့ ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေအားလုံး အလိုအလျှောက်ပါလာမယ်လို တွေး ထင်နေကြပါတယ်။
တကယ်တမ်း တွေ့မြင်ရတဲ့ အထောက်အထားတွေအရတော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုက စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဝင်လာတဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရဲ့ ပုံသဏ္ဍန် နဲ့ စာချုပ်ပါအချက်အလက်၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ကဏ္ဍ၊ လက်ခံတဲ့နိုင်ငံရဲ့ အခြေအနေနဲ့ ချမှတ်ထားတဲ့ မူဝါဒ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအပေါ်မှာ အဓိကမူတည်နေပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာညီလာခံ (UNCTAD) ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သုတေသနအစီရင်ခံစာတခု (Hanson, 2001) အရ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုက ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေရဲ့စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူပြုတယ် ဆိုတဲ့အဆိုဟာ သံသယရှိစရာဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်းလေ့လာတွေ့ရှိရတာကတော့ အခွန်အကောက် မရရှိခြင်း၊ အမြတ်အစွန်းများ တိုင်းပြည်တွင်းမှ ပြန်လည်စီးထွက် သွားခြင်း၊ ပြည်တွင်း ရှိလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်ခြင်းစတဲ့အချက်တွေလို့ ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှတဆင့်ရရှိလာနိုင်တဲ့ အခြားအကျိုးကျေးဇူးတွေဖြစ်တဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ နည်းပညာလွှဲပြောင်းရယူမှု၊ ပြည်တွင်း လုပ်သားထု၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်မှု စတာတွေကလည်း မှန်းချက်နဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ အများထင်မြင်နေကြတာက နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဝင်လာရင် နိုင်ငံတွင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးလာမယ် ဆိုတဲ့အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဂျာမဏီလို ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံတွေမှာတောင် နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်သမားအရေအတွက်ထက် အသေးစားနဲ့အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေမှာ လုပ်ကိုင်နေသူတွေက ပိုများပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သုတေသန အစီရင်ခံစာ (Ayyagari, Demirguc-Kunt, & Maksimovic, 2011) တခုမှာ ဖေါ်ပြထားတာက နိုင်ငံပေါင်း ၉၉ နိုင်ငံရှိ အလုပ်အကိုင်စုစုပေါင်းရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံခန့် (၆၆.၃၈%) ဟာ အသေးစားနဲ့အလတ်စား လုပ်ငန်းတွေက ဖန်တီးပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တကယ်လို့ စီးဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဟာ သဘာဝသယံဇာတ တူးဖေါ်ရေးကဏ္ဍကိုဘဲ ဦးတည်နေရင်တော့ အလုပ်အကိုင်သစ်တွေ ဖန်တီးနိုင်မှု အလားအလာ ပိုပြီးနည်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာ ဝသယံဇာတ တူးဖေါ်ရေးကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာ နေရာဒေသ ကွက်ကွက်လေး တခုမှာဘဲ စုပြုံနေလေ့ရှိပြီး နိုင်ငံတွင်းရှိ တခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆက်စပ်မှု အလွန်နည်းလေ့ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် နည်းပညာလွှဲပြောင်းမှု အကန့်အသတ်ရှိခြင်း၊ လိုအပ်သော နည်းပညာ အများစုကို ပြည်ပမှတင်သွင်းရခြင်း၊ စသည့်အချက်တွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ အာဖရိကနိုင်ငံတချို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ ဆိုရင်တော့ သတ္ထုတူးဖေါ်ရေးနှင့် ရေနံထုတ်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွေ အတွက် ဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံ မှုတွေက အလုပ်အကိုင် အနည်းငယ်ဘဲ ဖန်တီးပေးနိုင် တဲ့အပြင် ဒေသခံတွေရဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ပေါင်းစည်းနိုင်မှု အနည်းငယ်သာရှိတာ၊ ဒေသခံတွေ အနေနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပေါ်ကနေ ထိုက်သင့် သလောက် အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိတာတွေကို တွေ့ရပါတယ်။ ထို့အပြင် ဒီသဘာဝသယံဇာတ တူးဖေါ်ရေးကဏ္ဍကို စီးဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကြောင့် တခြားကဏ္ဍတွေကို စီးဝင်လာမယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကို လျော့ကျသွားစေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုဌာန (Harvard Institute for International Development)က ထုတ်ပြန်တဲ့ အစီရင်ခံစာမှာဖေါ်ပြထားတာ ကတော့ အဆိုပါ သဘာဝသယံဇာတ တူးဖေါ်ရေးကဏ္ဍကို စီးဝင်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက အဆိုပါ အာဖရိကနိုင်ငံတွေ က ပြည်သူတွေရဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို မလျှော့ချနိုင်တဲ့အပြင် သယံဇာတရဲ့ကျိမ်စာလို့လူသိများတဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှေးကွေးလျော့ ကျခြင်းကို ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ် (Sachs & Warner, 2003)။ ဒီလိုဖြစ်ရတာကလည်း ၎င်းနိုင်ငံများရှိ အာဏာရှိသူများနှင့် နိုင်ငံစုံကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ အကျင့်ပျက်ချစားမှု၊ ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်ထဲက အနည်းငယ်သာ ပြည်တွင်းကိုစီးဝင်လာမှု စတဲ့အချက်တွေနဲ့လည်း တစိတ်တပိုင်း သက်ဆိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအချက်တွေအပြင် ပထမဆောင်းပါးမှာတင်ပြခဲ့တဲ့ အချက်တွေကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဆွဲဆောင်နိုင်ရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ မူဝါဒတွေ အပေါ်မှာ အလွန်အမင်း အလေးထားနေကြခြင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလိုသုံးသပ်တဲ့နေရာမှာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ ပထမဦးစားပေးလုပ်သင့်တာကတော့ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဝင်လာတာနဲ့ မလွဲမသွေစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ မမှန်ကန်ဘူးဆိုတာကို အသိအမှတ်ပြုဖို့ပါဘဲ။ အချက်အလက် အထောက်အထားတွေအရလည်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စပြုနေတဲ့ နိုင်ငံတွေ ကို နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေစီးဝင်တာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဝင်လာလို့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာတာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဝင်ငွေနိမ့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ (တစ်ဦးကျဝင်ငွေ ဒေါ်လာ ၁၀၂၅ ထက်နိမ့်သောနိုင်ငံများ) အတွက် ကတော့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေက ယူဆောင်လာမယ့်ကောင်းကျိုးတချို့ရှိသလို အခြားအရေးပါတဲ့ ဆိုးပြစ်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှတဆင့် တိုင်းပြည်တွင်းကို ဝင်လာတဲ့ ရံပုံငွေတွေအားလုံးကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ ယူဆပြီး နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဆွဲဆောင်ရေးကို ဦးစားပေးတဲ့ မူဝါဒတွေချမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရဖို့များတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ အဓိကကတော့ အရေအတွက်ထက် ဝင်ရောက်လာတဲ့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ဦးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေ အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပမာဏများများ ဝင်လာရေးကို ဦးစားပေးမယ့် အစား ရေရှည်တည်တန့်မယ့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိအောင် အများဆုံးထောက် ကူပေးနိုင်မယ့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမျိုးကိုဘဲ ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီလို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအထောက် အကူပြု နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ ဝင်ရောက်လာရေးအတွက် အလေးပေး သင့်တာတွေကတော့
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ အရည်အသွေး (အဓိကအားဖြင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု နဲ့ တခြားထုတ်လုပ်မှု မဟုတ်တဲ့ကဏ္ဍတွေမှာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု)
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပမာဏများများဝင်ရောက်လာရေးထက် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အခြားကဏ္ဍများကို အကျိုးပြုနိုင်မယ့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို ဦးစားပေးသော မူဝါဒများ
မိမိနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်၊ နိုင်ငံအတွင်းရှိ ကုန်ထုတ်စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ၊ လုပ်သားထုရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်၊ နိုင်ငံ၏ အရွယ်အစား၊ နည်းပညာနှင့်အတတ်ပညာတွေ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်မှု တွေကို မူတည်ပြီး သင့်တော်သော မူဝါဒများ ချမှတ်ခြင်း စသည်တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမူဝါဒတွေချမှတ်ရာမှာ အဓိကဦးတည်သင့်တဲ့ အချက်တချို့ကတော့
တိုင်းပြည်ရဲ့ စက်မှုလက်မှုမူဝါဒတွေနဲ့ ကိုက်ညီပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာကို အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးနိုင်မည့် ကဏ္ဍတွေကို ဦးစားပေး အထောက်အကူပြုသောနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပုံသဏ္ဍန်ကို ရရှိရန်
အလုပ်အကိုင်သစ်များဖန်တီးနိုင်ရန်နှင့် နည်းပညာ၊ အတတ်ပညာများ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်ရန် အတွက် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်နိုင် မှုကို အစွမ်းကုန် မြှင့်တင်နိုင်ရန်
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်ပေးရန် အတွက် နိုင်ငံသားပိုင် အသေးစားနှင့်အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မြေတောင်မြှောက်ပေး ရန်
နည်းပညာနှင့်အတတ်ပညာ လွှဲပြောင်းရယူနိုင်မှုစွမ်းအား မြင့်မားလာစေရန်အတွက် အဆင့်မြင့်နှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏ အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးရန်
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသော ရံပုံငွေရရှိရန်အတွက် ရသင့်ရထိုက်သည့် အခွန်အကောက်များကို မချွင်းမချန်ရရှိရန်
နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအရ ဝင်ရောက်လာတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေက တိုင်းပြည်၏ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူမှုဘဝပါတ်ဝန်းကျင်တွေကို မထိခိုက်စရန် စတဲ့အချက်တွေဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Ayyagari, M., Demirguc-Kunt, A. and Maksimovic, V. (2011) Small vs. Young Firms across the World Contribution to Employment, Job Creation, and Growth, Policy Research Working Paper 5631, The World Bank.
Foreign Direct Investment: A Critical Perspective (Re-Define Working Paper): http://www.re-define.org/
Hanson, G. (2001) Should Countries Promote Foreign Direct Investment? G-24 Discussion Paper, UNCTAD http://archive.unctad.org/en/docs/pogdsmdpbg24d9.en.pdf
Sachs, J and Warner, A (2003) J. Natural Resource Abundance and Economic Growth www.cid.harvard.edu/hiid/517.pdf
နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု by မြင့်မိုးချစ် is licensed underaCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Posted by Myint Moe Chit at 8/11/2012 02:54:00 pm